Ukwakha i-Storybrand: I-7 Prospect Desires Ifisa Ibhizinisi Lakho Kuxhomeke Kuyo | Martech Zone
Cishe ngenyanga edlule, ngazibandakanya emhlanganweni wokumaketha ikhasimende. Kwakumnandi, sisebenza nomxhumanisi owaziwa ngokwenza imephu yomgwaqo yezinkampani zobuchwepheshe obuphezulu. Ngenkathi kwenziwa imephu yomgwaqo, ngangihlaba umxhwele ngezindlela ezihlukile futhi ezahlukanisiwe iqembu eza nazo. Kodwa-ke, bengizimisele futhi ukugcina iqembu ligxile emakethe ebhekisiwe.
Ukuqamba kuyisu elibucayi ezimbonini eziningi namuhla, kepha ngeke kube ngenxa yekhasimende. Izinkampani ezingakholeki ezinezixazululo ze-ingenius zehlulekile eminyakeni edlule ngoba zeza ukuzomaketha kusenesikhathi, noma zondla isifiso ebesingakabikho. Kokubili kungapela ukulahlwa - ukufunwa kuyisici esibucayi sayo yonke imikhiqizo noma insizakalo ephumelelayo.
Ngesikhathi ngithunyelwa ikhophi ye- Ukwakha i-Storybrand, nguDonald Miller, ngokweqiniso ngangingajabule neze ukuyifunda ngakho yahlala eshalofini lami lezincwadi kwaze kwaba muva nje. Bengicabanga ukuthi kuzoba enye futhi iphusha Ukuxoxa ngezindaba nokuthi ingayiguqula kanjani inkampani yakho… kepha akunjalo. Eqinisweni, incwadi ivula ngokuthi “Le akuyona incwadi emayelana nokuxoxa indaba yenkampani yakho.” Hawu!
Angifuni ukuyeka yonke incwadi, ukufundwa okusheshayo nokufundisayo engingakutusa kakhulu. Kodwa-ke, kukhona uhlu olulodwa olubucayi engifuna ukuluhlanganyela - ukukhetha ifayela le- isifiso efanele ekusindeni komkhiqizo wakho.
Amathemba Ayisikhombisa Afisa Ukusinda Komkhiqizo Wakho Kuya Ngokwe:
Ukonga izinsizakusebenza zezezimali - Ngabe uzokongela imali yekhasimende lakho?
Ukonga isikhathi - Ngabe imikhiqizo noma izinsizakalo zakho zizonikeza amakhasimende akho isikhathi esithe xaxa sokusebenza ezintweni ezibaluleke kakhulu?
Ukwakha ukuxhumana nomphakathi - Ingabe imikhiqizo noma izinsizakalo zakho ziyasondla isifiso sekhasimende lakho sokuxhunywa?
Ukuthola isimo - Ingabe uthengisa umkhiqizo noma insiza esiza ikhasimende lakho ukuthola amandla, udumo nokucwengwa?
Izinsizakusebenza zokuqongelela - Ukunikela ngomkhiqizo owandisiwe, imali engenayo noma ukuncipha kukadoti kunikeza amathuba amabhizinisi ukuze achume.
Isifiso esingokwemvelo sokuphana - Bonke abantu banesifiso esingokwemvelo sokuphana.
Isifiso sencazelo - Ithuba lamakhasimende akho lokubamba iqhaza kokuthile okukhulu kunawo.
Njengoba umlobi uDonald Miller esho:
Umgomo wokumaka kwethu kufanele ukuthi wonke amakhasimende angaba khona azi kahle lapho sifuna ukuwathatha khona.
Yiziphi izifiso ongena kuzo nomkhiqizo wakho?
Mayelana nokwakha i-Storybrand
Inqubo yeStoryBrand iyisixazululo esifakazelwe ukuthi abaholi bamabhizinisi bomzabalazo babhekene nabo lapho bekhuluma ngamabhizinisi abo. Le ndlela yokuguqula ukuxhumana yokuxhumana namakhasimende inikeza abafundi ithuba lokuncintisana lokugcina, iveze imfihlo yokusiza amakhasimende abo ukuthi aqonde izinzuzo eziphoqayo zokusebenzisa imikhiqizo, imibono noma izinsiza zabo.
Ukwakha iBrandBrand wenza lokhu ngokufundisa abafundi izindaba eziyisikhombisa zomhlaba wonke abantu abaphendula kuzo; isizathu sangempela lapho abathengi bethenga khona; indlela yokwenza lula umyalezo womkhiqizo ukuze abantu bawuqonde; nokuthi ungayilungiselela kanjani imiyalezo ephumelela kunazo zonke kumawebhusayithi, izincwajana, kanye nemithombo yezokuxhumana.
Noma ngabe ungumqondisi wezokumaketha wenkampani eyizigidigidi zamadola, ungumnikazi webhizinisi elincane, usopolitiki ongena esikhundleni, noma umculi ohamba phambili weqembu lomculo we-rock, Ukwakha iBrandBrand izoguqula unomphela indlela okhuluma ngayo ngokuthi ungubani, wenzani, nenani eliyingqayizivele oliletha kumakhasimende akho.
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we-Amazon futhi ngisebenzisa izixhumanisi ukuthenga le ncwadi kulokhu okuthunyelwe.
Tags: brandUkufaka uphawuukwakha i-storybrandIndaba yekhasimendeisifisoudonald millerUkunika Amandla Ukuthengisandaba
Uhlu lokuhlola lwe-WordPress: Uhlu Lokugcina Lwamathiphu, Amathuluzi, Nemikhuba Emihle